တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ ရောင်းရန်အတွက် အိမ်ရာများ -146 စာရင်းများ | FazWaz.com.mm
ရောင်းရန်အတွက် အိမ်ရာအိမ်ခြံမြေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအိမ်သစ်များဈေးနှုန်းလျော့ချထားသော အိမ်များ
တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ ရောင်းရန်အတွက် အိမ်ရာများ
FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 146 အိမ်ရာများ
Virtual 3D tours of ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အိမ်ရာများ for sale
Turn on this filter to only view အိမ်ရာများ for sale with 3D virtual tours!
4,800 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
3 အိပ်ခန်း အိမ်ရာ for sale in ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 12,917 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 4,800 သိန်း (0 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သ...
3 1 12,917 စတုရန်းပေ
4,200 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,368 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 4,200 သိန်း (2 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
332,368 စတုရန်းပေ
6 Bedroom House for sale in Dagon Myothit (Seikkan), Yangon
ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
13,000 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
6 အိပ်ခန်း အိမ်ရာ for sale in ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော6အိပ်ခန်းများ နှင့်5ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 11,873 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 13,000 သိန်း (1 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူန...
6511,873 စတုရန်းပေ
2 Bedroom House for sale in South Okkalapa, Yangon
2,400 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
2 အိပ်ခန်း အိမ်ရာ for sale in ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 12,917 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 2,400 သိန်း (0 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သ...
2 1 12,917 စတုရန်းပေ
5 Bedroom House for sale in Ah Lel, Yangon
19,500 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
5 အိပ်ခန်း အိမ်ရာ for sale in ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော5အိပ်ခန်းများ နှင့်5ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 105,486 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 19,500 သိန်း (0 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူ...
55105,486 စတုရန်းပေ
7 အိပ်ခန်း အိမ်ရာ for sale in ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
Don't miss out! Get notified when new အိမ်ရာများ for sale are listed တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
2 Bedroom House for Sale or Rent in Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 1,500 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 7,500 သိန်း (5 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြ...
1 Bedroom House for sale in Yangon
9,500 သိန်း (3 သိန်း/စတုရန်းပေ)
1 အိပ်ခန်း အိမ်ရာ for sale in ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 2,500 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 9,500 သိန်း (4 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။
1 1 2,500 စတုရန်းပေ
6,500 သိန်း (5 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 1,250 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 6,500 သိန်း (5 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြ...
2 1 1,250 စတုရန်းပေ
2 Bedroom House for sale in Yangon
6,500 သိန်း (3 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,800 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 6,500 သိန်း (4 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
1 Bedroom House for sale in North Okkalapa, Yangon
မြောက်ဥက္ကလာ, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
5,500 သိန်း (6 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 800 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 5,500 သိန်း (7 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။
1 1 800 စတုရန်းပေ
2 Bedroom House for sale in North Okkalapa, Yangon
1,950 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 3,000 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 1,950 သိန်း (1 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည...
2 1 3,000 စတုရန်းပေ
1 Bedroom House for sale in Mayangone, Yangon
10,000 သိန်း (5 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 1,800 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 10,000 သိန်း (6 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။
1 1 1,800 စတုရန်းပေ
3 Bedroom House for sale in Mayangone, Yangon
13,500 သိန်း (7 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,800 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 13,500 သိန်း (8 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိ...
15,000 သိန်း (6 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,400 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 15,000 သိန်း (6 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိ...
2 Bedroom House for sale in Pazundaung, Yangon
4,500 သိန်း (4 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,000 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 4,500 သိန်း (5 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
3 Bedroom House for sale in Mingalar Taung Nyunt, Yangon
4,100 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 3,000 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 4,100 သိန်း (1 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
4 Bedroom House for sale in Thaketa, Yangon
4,000 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
4 အိပ်ခန်း အိမ်ရာ for sale in ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော4အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,750 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 4,000 သိန်း (2 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
441,750 စတုရန်းပေ
6 Bedroom House for sale in Thaketa, Yangon
7,800 သိန်း (3 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော6အိပ်ခန်းများ နှင့်5ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,450 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 7,800 သိန်း (3 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
652,450 စတုရန်းပေ
We offer the best prices and price match on all အိမ်ရာများ for sale တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,000 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,160 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 3,000 သိန်း (1 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
322,160 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 2,400 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 3,000 သိန်း (1 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။
2,000 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 1,100 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 2,000 သိန်း (2 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည...
3 1 1,100 စတုရန်းပေ
1,800 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် n/a တို့ဖြင့် 2,100 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 1,800 သိန်း (1 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။
1 2,100 စတုရန်းပေ
9 Bedroom House for sale in Dagon Myothit (Seikkan), Yangon
9 အိပ်ခန်း အိမ်ရာ for sale in ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော9အိပ်ခန်းများ နှင့်9ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,510 စတုရန်းပေ အိမ် တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်သည် ဤ အိမ် ကို အခြေခံဈေးနှုန်း 4,500 သိန်း (2 သိန်း/SqM) ဖြင့် ဝယ်ယူနို...
992,510 စတုရန်းပေ
1 - 30 ၏ 146 အဖြေများ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၏ အိမ်နီးချင်းများကို ဖော်ထုတ်ပါ
သင့်အတွက် 77 အိမ်ရာများ
ဝယ်ပါ : 522 သိန်း - 28.9K သိန်း
သင့်အတွက် 56 အိမ်ရာများ
ဝယ်ပါ : 398 သိန်း - 49.8K သိန်း
သင့်အတွက် 12 အိမ်ရာများ
ဝယ်ပါ : 2.49K သိန်း - 19.4K သိန်း
သင့်အတွက် 1 အိမ်ရာများ
ဝယ်ပါ : 846 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အိမ်ခြံမြေ ပုံစံများ
ဦးတည်ရာများနှင့် ပျမ်းမျှများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အိမ်ရာ ဈေးကွက်ကို လေ့လာပါ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် နေထိုင်ခြင်းအတွက် အားထုတ်နိုင်စွမ်း
အလယ်အလတ်ရောင်းဈေးသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် ခန့်မှန်းချေ 5,480 သိန်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ၁စတုရန်းပေ အတွက် အလယ်အလတ်ဈေးနှုန်းမှာ2သိန်းဖြ စ်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် ရောင်းရန်အတွက် 146 အိမ်ခြံမြေများရှိသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အိမ်ရာ တွင် အိမ်ခြံမြေ အရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ခြံမြေ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းမျ
အိမ်ရာ အရွယ်အစား ပျမ်းမျှ ဈေးနှုန်း 1 အိပ်ခန်း (15 အိမ်ရာများကြည့်ပါ) 4,370 သိန်း2အိပ်ခန်းများ (22 အိမ်ရာများကြည့်ပါ) 5,020 သိန်း3အိပ်ခန်းများ (31 အိမ်ရာများကြည့်ပါ) 5,670 သိန်း4အိပ်ခန်းများ (29 အိမ်ရာများကြည့်ပါ) 6,200 သိန်း5အိပ်ခန်းများ (20 အိမ်ရာများကြည့်ပါ) 11,500 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် အိမ်နီးချင်းများ
အရှေ့ပိုင်းခရိုင် 77 အိမ်ရာများ ရရှိနိုင်သော
အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်) 56 အိမ်ရာများ ရရှိနိုင်သော
မြောက်ပိုင်းခရိုင် 12 အိမ်ရာများ ရရှိနိုင်သော
တောင်ပိုင်းခရိုင် 1 အိမ်ရာ ရရှိနိုင်သော
ဇိမ်ခံပစ္စည်း အိမ်ခြံမြေ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တတ်နိုင်သေ အိမ်ခြံမြေ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး